Masoarabo: Fihaonana mangina sy fiarahabana Eid · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2018 16:01 GMT
Avy ao Libya, Lona sy A.Adam, manoratra ao amin'ny Flying Birds, mirary antsika Tratry ny Eid amin'ny alalan'ny fandefasana sary.
Fihetseham-po tahaka izany ihany koa no zarain'i Te3meh avy ao Ejypta, izay mandefa sary noforonina.
Osama, avy ao Emirà Arabo Mitambatra mankalaza ny Eid ihany koa, ary nanokatra ny masony amin'ny fomba fanao vaovao.
Manoratra avy any Bahrain, bilaogera Saodiana Sara miresaka momba ny zavatra niainany tao amin'ny fanjakana nosy akaikin'ny tranony, izay alehany any am-pianarana. Na dia misaraka amin'ny Saodiana amin'ny lalana 25km aza i Bahrain, dia tena mifanavaka eo amin'izao tontolo izao ny firenena roa tonta.
Amin'ity herinandro ity, milaza amintsika ny lalana noraisiny niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, izay vao nahazo ny fahazoan-dàlana hitondra fiara izy.